Mahaela velona ny fampihetseham-batana japoney, azo tahafina tsara !
Mankarary ny tsy manao “echauffement”
Tafiditra ao anatin’ny fitaizam-batana tokony hataon’ny olona rehetra ny fanaovana fampihetseham-batana.
Tavy amin'ny andilana, azo esorina !
Ny faritra manodidina ny valahana sy ny andilana no anisany sarotra ahena indrindra. Hanampy anao hanala ireo tavy amin'ireo faritra ireo kosa ireto fampihetseham-batana manaraka ireto :
Otra 5 miaro ny tarehy tsy hiroraraka
Rehefa mandroso ny taona dia miha-miroraka sy mivaha ny fizozoran’ny hodi-tava hany ka miroraka ny takolaka. Amin’ny fahatanorana dia miendrika telozoro mivadika miainga amin’ny saoka mankany amin’ny pomety sy ny volomaso ny tarehy.
Manamafimafy ny fitombenana, ao an-trano
Raha te-hanamafy sy hanalehibe ny fitombenana sy ny fe dia azo atao tsara ireto fampihetseham-batana ireto na dia ao an-trano ihany aza :
Mampiakatra ny tratra ao an-trano
Ny tratra no anisan’ny mampiavaka ny bikan’ny vehivavy amin’ny an’ny lehilahy. Toy ny faritra rehetra amin’ny vatana dia mila koloina izy io.
Manafisaka kibo ao an-trano
Raha tiana hiala ny roroa eo amin’ny kibo dia mila ovaovaina ny fampihetseham-batana hikoloana azy. Ireto telo manaraka ireto dia mikolo ny hoza-kibo manokana. Atao marina tsara ny fihetsika mba handaitra.
Malaza amin’ny fahaizany mitaiza vatana sy bika ny japoney satria efa tafiditra ao anatin’ny kolotsain’izy ireo rahateo izany.
Ankoatra ny fahaizana misakafo ara-pahasalamana dia misy koa ny fomba fitaizam-batana ananan’izy ireo, ary mahalava velona. Ireto fampihetseham-batana ireto izao dia novolavolain’i Katsuzo Nishi, lehilahy iray nanana aretina mahafaty saingy avotr’ireo fampihetseham-batana novolavolainy ka nahavelona azy hatramin’ny 75 taona.
1. Manao toy ny herana
Mampikoriana tsara ny rà any anatin’ny ranjo izy ity. Manasitrana ny ranjo manaintaina izy ity noho izany. Matory amin’ny kibo amin’ny toerana mafimafy sady marina tsara. Aforitra ny lohalika ka ezahina takarina amin’ny felan-tongotra ny fitombenana. Atao an-tsaina fa toy ny herana (roseau) ahetsiketsiky ny rivotra ireo ranjo sy tongotra. Mety tsy ho vitanao avy hatrany fa atao matetika ity fampihetseham-batana ity mandrapahavitanao azy tsara.
2. Manao toy ny ravin-kazo
Manatsara ny fomba fijoro indray ity manaraka ity. Manatsara ny fiasan’ny ati-doha koa. Matory mitsilany. Mijery ny valitafo ny maso. Toniana tsara ny saina mba hahatsiaro ho toy ny maivana sy poakaty ny vatana. Aforitra ny lohalika fa atehaka ny tany hatrany ny felan-tongotra. Atao manakaiky ny fitombenana ny tongotra. Ezahina takarina amin’ny fela-tanana ny lohalika kanefa tsy atao miala ny tany ny lamosina. Raha efa izay dia akarina ny loha. Tazonina hahitsy tsara foana kosa ny lamosina. Mitazona izao paozy izao izay ela vita indrindra. Rehefa tsy zaka intsony dia averina moramora amin’ny paozy niaingana ny loha.
3. Manao toy ny sambo
Manamafy ny hozatra eo amin’ny manodidina ny kibo ity manaraka ity sady manafisaka ny vavony. Manatsara ny fiasan’ny taovam-pandevonan-kanina koa. Na ny vehivavy bevohoka aza dia afaka manao azy ity. Mitsilany amin’ny tany aloha. Sady manisa hatramin’ny 4 no akarina ny tongotra roa ary atao manondro ny lanitra ny loha-tongotra. Akarina koa ny loha sy ny lamosina ary ny tratra. Tazonina hahitsy hatrany ny lamosina rehefa manao izany. Takarina amin’ny lohan-drantsan-tanana ny lohalika. Tsy mihetsika amin’izao paozy izao ka rehefa mahatsiaro vizana vao miverina amin’ny paozy niaingana. Averina im-10.
Santionany ihany ireo fa mbola maro hafa ny fampihetseham-batana novolavolain’i Katsuzo Nishi izay ho entina aminao eto amin’ny Jejoo ihany amin’ny manaraka.